Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV
Pejy 2 amin_ny 39
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV
LAHATSARY: Ny fomba fifidianana ny Biraon'ny Filankevi-Pitantanana Global Voices 2020
Mediam-bahoaka13 Avrily 2020
Fanazavazavana haingana sy mahomby momba ny fomba atao amin'ny fifidianana biraon'ny filankevi-pitantanana hoavy izay manasongadina ireo kandida maherifo miaraka amin'ny feonkiran'ny sahona any amin'ny tany mafana !
Mpifaninana ho solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny filankevipitantanana GV 2020: Khojasta Sameyee
Mediam-bahoaka08 Avrily 2020
"Raisiko an-tanandroa ity fotoana ity mba hahatonga ahy ho mpirotsaka misimisy kokoa ato amin'ny GV ary hiasa amin'ny fanandratana ny feon'ireo olona manerana ny tany."
Fiovàn'ny mpitantana ny Lingua Arabo!
Fanolorana an'i Mariam Abuadas, mpitantana vaovao ny Lingua Arabo!
Filankevitra-GV-202007 Avrily 2020
"Mijanona ho fotoana betsaka amin'ny fiainako ny GV, ary tiako ny hanome domberina ho an'ireo GV-ers mpiaramiasa amiko sy hanokana sasantsasany amin'ny fotoanako hisoloana tena ny feo sy ny zava-mahaliana an-dry zareo."
Mediam-bahoaka05 Avrily 2020
"Tena mientanentana fatratra aho momba ny ho fahafahana ho lasa isan'ny ao anaty dingana hahatonga ny vondrompiarahamonina misy antsika hatanjaka kokoa, ho marintoerana sy haharitra."
Mpifaninana ho solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny filankevipitantanana GV 2020: Adéṣínà Ghani Ayẹni (Ọmọ Yoòbá)
"Tiako ny hanana traikefa tsy mbola nifindra tànana amin'ny fomba fakàna fanapahankevitra ato anatin'ny vondrompiarahamonina GV, ary koa hianatra avy amin'ireo manampahaizana manokana sy ireo anti-panahy ao anatin'ny filankevitra."
Vao avy namoaka tetikasa vaovao mifantoka amin'ny tenim-pankahalana, fanodikodinam-baovao ary ny fandrahonana amin'ny sehatra nomerika Afrikana mandritra vanim-potoana mafana ara-politika ny Global Voices. Natomboka tamin'ny volana Martsa ary hifarana amin'ny volana Septambra ity tetikasa nomena anarana hoe “The Identity Matrix: Sehatra handrindrana ny fandrahonana an-tserasera amin'ny fanehoan-kevitra eto Afrika” ity....
Kandida amin'ny fifidianana Biraon'ny Filankevi-Pitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak'asa: Mong Palatino
Mediam-bahoaka03 Avrily 2020
"Hirika tsy manampaharoa izao hizarana ny fomba fijerin'ny menavazana hanampiana amin'ny fitarihana amin'ny hoavin'ny vondrom-piarahamonintsika"
Kandida amin'ny fifidianana Biraon'ny Filankevi-Pitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak'asa: Nwachukwu Egbunike
Ho voninahitra [tsy mendrika] ahy ny hanompo ao amin'ny filankevi-pitantanana. Mari-pitiavana avy amin'ireo mitovy amiko ary antso hanome betsaka kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina tena tiako izany.
Kandidà amin'ny fifidianana biraon'ny filankevipitantanana GV 2020, misolo tena ny nanao fifanarahana arak'asa: Gabriela García Calderón
"Amin'ny fifaninanana hahazoana toerana ao amin'ny fitantanana, manantena ny "hisolo ny feon'ireo Gvers hafa i Gabriela. Heveriko fa fantatro tsara ny atao hoe GVer..."